आयोजकले दर्शक भएर कहिल्यै सोचेनन् !
ब्लग आयोजकले दर्शक भएर कहिल्यै सोचेनन् !
बाह्रखरी - राजेश खनाल सोमबार, असोज १, २०७५
कार्यक्रम स्थलमा पुग्नुपर्ने ९ बजे नै थियो । खबर त्यही आएको थियो । त्यसैले समयमै पुग्नेगरी यात्रा थालियो । यात्रा थाल्दा समयमा पुगिँदैन कि भन्ने त्रास रहन्छ । काठमाडौंको ट्राफिक जामले सिर्जना गरेको हो यो त्रास । झनै कार्यालय समयमा जामले ठीक समयमा कसैलाई कार्यालय पुग्न दिँदैन । त्यस दिन शनिबार परेकोले अरुदिन जस्तो जामले वाक्कदिक्क भने लगाएन ।
नेपान संस्थाको वार्षिक कार्यक्रम थियो । नयाँ बानेश्वर शंखमुल बागमती छेउको एउटा ब्यांक्वेटमा कार्यक्रम हुँदै थियो । समयमै त कार्यक्रम के सुरु होला र ? यसले केही बेर बानेश्वरतिरै अड्कायो । शनिबार, साथीभाइले केही समय थुते ।
समय धेरै नाघ्न पनि भएन । कार्यक्रम सकिएर पुग्दा कार्यक्रममा गएको अर्थ हुन्थेन । त्यसपछि हतारो लाग्यो । पाइला दह्रो चालेँ ।
कार्यक्रम स्थलमा पुग्दा पौने १० बजिसकेको थिएन । कार्यक्रमका लागि तोकिएको आधाघन्टाभन्दा पनि अबेला पुग्दै थिएँ । त्यसैले ढिलो भयो भन्ने त्रास पनि मनमा थियो ।
कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्दा आश्चर्यचकित भएँ । कार्यक्रमका अतिथिहरुलाई अग्रभागमा आसन ग्रहणको कार्यक्रम सुरु गर्ने तरखर भरखर हुँदैथियो । नेपानका अध्यक्ष मेरा मित्र चेतनाथ कँडेल केही कोर्दैथिए कागजमा । मैले उनलाई कार्यक्रममा उपस्थित भएको जनाउ दिएँ । अनि एउटा कुर्सी समाएँ ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मवारी लिएका फटिकबहादुर थापाले अध्यक्ष कँडेलजीलाई अग्रासनमा बोलाए । यसरी एक दुई गर्दै दस बाह्र जना अग्रभागमा उक्लिए । अग्रभागमा उक्लने जति अधिकांश नेपानका पूर्व अध्यक्ष थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको आगमन भने भइसकेको थिएन । उनी बाटैमा कतै थिए । जाममा थिए वा अरु कुनै काममा थिए । तर, बारम्बार उदघोषकले प्रमुख अतिथि आइपुग्नु भएपछि उहाँलाई आसन ग्रहण गराउने वाचा दोहो¥याई रहे ।
प्रमुख अतिथि को थिए मैले ठम्याउन सकिरहेको थिइन । पछि नाम सुने कोही पौडेल थरका रहेछन् ।
आसन ग्रहण गराएपछि अब त उद्घोषकले कार्यक्रम सुरु गर्लान् भन्ने लाग्यो । तर, सुरु भयो उपस्थितहरुको परिचय कार्यक्रम । मञ्चासीनहरुले आआफ्नो परिचय दिन प्रारम्भ गरे । केहीले परिचय दिने क्रममा आफू नेपानको पूर्व अध्यक्ष र आजीवन सदस्य भएको बताए । आश्चर्य, तिनले पूर्व अध्यक्ष र आजीवन सदस्यको सम्मान आफूलाई भालुको कन्पटझैँ भएझै गरे । लाग्यो, उनीहरु आफ्नो मनको तीतो पोख्न त्यहाँ उपस्थित भएका हुन् ।
त्यो दिन नेपानको २४औं साधारण सभा थियो । पहिलो चरणमा उद्घाटन र दोस्रो चरणमा बन्द सत्र हुने कार्यतालिकामा उल्लेख थियो । हामी उद्घाटनका लागि मात्रै गएका थियौँ । उदघाटन सत्रपछि मात्रै बन्द सत्र हुन्थ्यो । ती आजीवन सदस्य, पूर्व अध्यक्ष र साधारण सदस्यहरुले आफ्नो मनको पीडा वा भनाइ वा भँडास, जे पोखे पनि बन्द सत्रमै पोख्दा बेस हुन्थ्यो । तर, उद्घाटन कार्यक्रममै त्यस्ता भँडास बाहिरिएपछि आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविकै थियो ।
ती पूर्व अध्यक्षलगायतका व्यक्ति एनजीओ आईएनजीओमा राम्रै पदमा काम गरिरहेका वा गरिसकेका भएको तिनले दिएको परिचयबाट थाहा लाग्यो । तिनको परिचय सुनेर झनै पीडा भयो । यसरी उद्घाटन समारोहमा तिनले मनको भँडास पोख्नुले सन्देश पक्कै राम्रो दिएको थिएन । तिनले अलिकति समय पनि पर्खन सकेनन् । उदघाटन समारोहभन्दा बन्द सत्र यस कार्यका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि तिनले बुझ्न सकेनन् !
त्यो दिन निक्कै बेरपछि मात्रै प्रमुख अतिथि कार्यक्रममा आइपुगे । अनिमात्रै मूल कार्यक्रम सुरु भयो । त्यहाँ उपस्थित सबैको समयको नाश भएको प्रमुख अतिथिले सायद महसुस नै गरेनन् ।
दृश्य दुई :
सोही कार्यक्रममा म सम्झिरहेको थिएँ, चार वर्ष अघिको एउटा दिन । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । महोत्तरी परिवारको कार्यक्रम थियो बानेश्वरमा नै । महोत्तरीकै रामकुमारप्रसाद शाह प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । परिवारले उनैलाई सम्मान गर्दैथियो । प्रमुख अतिथिकारुपमा सुशील कोइराला आमन्त्रित थिए ।
बिहान १० बजे कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री सबा १० सम्म आइपुग्ने खबर थियो । त्यसै अनुरुप काम हुँदैथियो । बोलाइएका पाहुनाहरु पनि आउँदै थिए । प्रधानमन्त्री ढिलै आउँछन् भनेर सबै अबेला गर्दैथिए । प्रधान न्यायाधीश र अन्य अतिथिको आगमन हुँदै थियो । तर पौने १० नबज्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कार्यक्रम स्थलमा आइपुगे । हामी आयोजकहरुलाई के गरुँगरुँ भयो ।
खैर, कार्यक्रम समयभन्दा अगाडिनै सुरु भयो । पाहुनाहरु आउँदै थिए । प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशलाई सम्मान गरे । प्रमुख अतिथिको मन्तव्य दिए । अनि फर्किए । त्यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई आधाघन्टासम्म पर्खने मनःस्थितिमा आयोजकहरु थिए । कारण, संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको क्रम तीव्रतररुपमा चलिरहेको थियो । त्यसैले आयोजकहरु यो मनःस्थितिमा रहनु अस्वाभाविक थिएन । तर, प्रमुख अतिथिले सबैलाई जिल्याए ।
कतिपय कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिले अबेला आइदिएर उपस्थित पाहुनाहरुलाई जिल्याउँदै आएका छन् । यस्तो धेरै कार्यक्रमहरुमा भएको देखिएको छ । यद्यपि, ढिलो आउँदा पनि प्रमुख अतिथिको भूमिका काँधमा लिएका व्यक्तिको अनुहारमा ग्लानिका रेखा रतीभर देखिँदैन ।
पक्कै पनि, कार्यक्रममा मुख्य पाहुना चाँडै आउँदा आयोजक अलमलिन्छन् । उता उपस्थित सहभागीहरुले आफूलाई सहज महसुस गर्छन् । तर, आमन्त्रित पाहुनाहरुको भिड उर्लिँदा पनि प्रमखु अतिथिको आगमन नहुँदा भने उपस्थित सबैले आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद भइरहेको महसुस गरेका हुन्छन् । भलै यस विषयमा नबोलुन् । यता आयोजकहरुको ध्यान भने यसमा कहिले पनि गएको पाइँदैन ।
प्रमुख अतिथिको आगमनकै कारण कार्यक्रम ढिलो हुनु वा प्रमुख अतिथिलाई कुर्ने बहानामा समय बिताउन अनेक खेल खेलिनुले उपस्थित सहभागीलाई कहिल्यै सहज बनाउँँदैन । बरु कार्यक्रम समयमा नै सुरु गरिदिएर समय नाघेर आउने प्रमुख अतिथिलाई पछि नै आसन ग्रहण गराउने चलन चलाउने हो भने कार्यक्रममा उपस्थितहरुले आयोजकको प्रशंसा नै गर्छन् । गाली गर्दैनन् । गाली गरेपनि प्रमुख अतिथिले गर्लान्, मलाई कुरेनन् भनेर ।
कुनै पनि आयोजकले कार्यक्रमलाई महत्त्व दिनुपर्छ । प्रमुख अतिथिलाई होइन । प्रमुख अतिथिबिना पनि कार्यक्रम राम्ररी चल्न सक्छ भन्ने उदाहरण आयोजकले दिन सक्नुपर्छ ।
एउटा अर्को प्रसंग जोड्न मनलाग्यो । दुई वर्षअघि महाकाल तीनचुलीमा कपन बानेश्वर साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिकाले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । त्यो दिन करिब पचासभन्दा बढी व्यक्तिलाई सम्मान गर्दैथियो आयोजक समूहले । यसरी धेरै व्यक्तिलाई एकैपटक सम्मान गर्दा मञ्चमा नबोलाउँदा पनि हुन्थ्यो । किनभने मञ्चमा बोलाउने समयमा आधा कार्यक्रम सम्पन्न भइसक्थ्यो । तर, आयोजकले यतातिर सोच्दै सोचेनन् । उद्घोषकले नाम लिए जति मञ्चमा उक्लिँदै गए । डर लाग्यो, मञ्चाभिमुख कोही नहुने भए । हुन पनि दर्शक दीर्घामा कमै मानिस रहे ।
कार्यक्रम गर्ने भन्दैमा जथाभावी कार्यक्रम गर्ने प्रचलनले पनि यस्ता अप्ठ्याराहरु सिर्जना हुन्छन् । मञ्चको कार्यक्रम सानो गरिदिने हो भने दर्शकदीर्घामा रहेकाहरुले असहज महसुस गर्न पाउँदैनन् । तथापि कार्यक्रम लम्याउने आयोजक संस्था धेरै देखिएका छन् । भ्याएजति अतिथिलाई कोचाकोच गरेर मञ्चमा बोलाउने परम्पराले कार्यक्रमको साख नै खस्कँदै गएको तर्फ नसोचिनु लाई विडम्बना नै भन्नु पर्छ ।
कहिले काँही मञ्चमा कोही हुँदैनन् । तर, कार्यक्रमका उदघोषक नै यति सर्वेसर्वा भइदिन्छन् लाग्छ तिनले आफ्नोबाहेक अरुका कुरा सुन्ने गरेकै छैनन् । भरखर साइकल मोटरसाइकल सिकेका सिकारुले जथाभावी सवारी कुदाएसरी तिनले आफ्नो मनमा लागेका सबै थोक ओकल्ने ठाउँ त्यही माइक देख्छन् ।
धेरैअगाडिको कुरो होइन । महिना दिनअघि वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल र भरतराज पोखरेलको संयुक्त लेखनीमा प्रकाशित ‘नेपालका मन्त्री र सांसदहरु’को लोकार्पण हुँदैथियो । नेपाली चलन भन्दै तोकिएको समयभन्दा केही समय थप भयो नै । त्यसपछि उदघोषकले बोल्न थाले । ती उदघोषकले यति धेरै बोले, मेरा छेउछाउमा बसेका सबैले ‘हैत्तेरिका, कति लामो बोलेको होला’ सम्म भन्न भ्याए । यसरी दर्शकदीर्घामा दिक्क मान्दै भनिएको ‘हैत्तेरिका’ ती उदघोषकको कानसम्म पुग्न सकेको थिएन । उनी बोलीरहेकै थिए ।
उक्त कार्यक्रम तुलनात्मकरुपमा अन्य कार्यक्रमभन्दा अवधिमा छोटो थियो । पाहुनाहरुका मन्तव्य पनि छोटा थिए । विमोचन कार्य पनि सानो समयमा नै सकियो । हुनसक्छ उद्घोषकबाट दिक्क भएकै कारण अरु पाहुनाले छोटो बोलेका हुन् । तर, उद्घोषकले बुझ्नै सकेनन् ।
अचेल मानिससँग समय कम छ । धेरैतिर पुग्नुपर्ने बाध्यता सबैलाई छ । कार्यक्रममा नजाँदा पनि आयोजक रिसाउने जाँदा कार्यक्रमको समयले सबैतिर असर पु¥याउने । कति त पुगेको केहीबेरमै पनि निस्किने गरेको पाइन्छ ।
आयोजकले कार्यक्रमको समयलाई अलिकति ध्यानमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने र निश्चित समयमा कार्यक्रम सकिने जानकारी गराउने हो भने कार्यक्रम अवधिभर पाहुना बस्न सक्छन् । हैन, आयोजकले जबरजस्ती नै गर्ने सोच राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले टीकाटिप्पणीमात्रै बढाउँछ । अरु केही दिन सक्तैन ।
एउटा अर्को प्रसंग । हरेक महिना आयोजना हुने ‘सिर्जना संवाद’ कार्यक्रम बस्नुपर्ने, समय दिनुपर्ने कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रममा नयाँ प्रकाशित पुस्तक माथि अन्तक्र्रिया गरिन्छ । पुस्तकका कमि कमजोरीलाई केलाइन्छ । छलफल हुन्छ । बस्, यसको एउटै मात्रै कमजोरी हो, दिउँसो २ बजे सुरु भएको कार्यक्रम कहिले काहीँ सकिँदा ६ पनि बज्छ ।
निश्चयपनि कार्यक्रमलाई छोटो र छरितो बनाउने हो भने महिनाको पहिलो साता एउटा उपलब्धिपूर्ण कार्यक्रम भएको मान्न सकिन्छ । तर, यसको समय घट्दो क्रममा झरेको देखिँदैन । झन्झन् उक्लँदो छ । सिर्जना संवाद कार्यक्रमका संयोजक प्रा.डा. सनतकुमार वस्तीको कार्यक्रम संचालन शैलीको प्रशंसा सबैले गर्छन् । त्यही कार्यक्रम एक सबा घन्टामा सक्याउनेतिर आयोजकहरुले सोचीदिए त्यसको प्रशंसा सबैले गर्ने थिए ।
हामी अहिले परिवर्तित समयको चर्चा गर्छौं । हरेकतिर नयाँ नयाँ प्रयोग भइरहेका छन् । लेखनदेखि कार्यसम्पादनसम्ममा प्रयोगधर्मी सोच बढ्दै गएको छ । नयाँ र नौलो तरिकाबाट केही गरौँ भन्ने मानसिकतामा सबै सक्रिय छन् । तर, समय समयमा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुमा आयोजक संस्था वा व्यक्तिले कार्यक्रमको समयलाई ध्यान दिन चाहिरहेको देखिँदैन । कतैकतै कहिले काँही यस्ता नयाँ सोच र अवधारणाका साथ कार्यक्रम सम्पन्न भएका होलान् । तथापि, अधिकांशतः कार्यक्रमलाई लम्याउने काममा नै आयोजक संस्था सक्रिय रहेको देखिन्छ ।
यहाँ त केही कार्यक्रमका चर्चामात्रै गरिएको हो । यस्ता धेरै संघसंस्था छन्, जस्ले कार्यक्रमका नाममा दुई चार घन्टा थन्क्याएरै राखिदिन्छन् । सुन्दा तीतो लाग्न सक्छ तर यथार्थ हो । कार्यक्रमका आयोजकहरुले आफूलाई दर्शक दीर्घामा राखेर कहिले पनि कार्यक्रम गरेनन् । जहिले पनि उपस्थित सहभागीलाई कार्यक्रमका नाममा सकस दिने काममात्रै भयो । कतिपय कार्यक्रम त सकसपूर्ण मात्रै होइन् यातनै जस्तो पनि भइदिएको छ । के एउटा कार्यक्रममा गएको सहभागी वा दर्शकले त्यही चाहन्छ त ? अवश्य पनि चाँहदैन ।
कुनै पनि कार्यक्रमलाई छोटो छरितो र मीठो बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ आयोजक संस्थाहरुले अब सोच्नुपर्छ । आयोजकले पनि अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दर्शक भएर सोच्नुपर्छ । अनिमात्रै कार्यक्रम राम्रो र सफल हुन सक्छ । अन्यथा कार्यक्रम सकिए छि टीकाटिप्पणी गर्ने क्रममा कमी आउँदैन ।
सोमबार, असोज १, २०७५ मा प्रकाशित
सुविचारले दिएको सय वर्ष
मीरा र यो मात चढेको साँझमा...